Data momba ny varotra: ny lakilen'ny miavaka amin'ny 2021 sy ny ankoatra | Martech Zone
Amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy misy fialan-tsiny amin'ny tsy fahafantarana hoe iza no hamidy ny vokatrao sy ny serivisinao ary izay tadiavin'ny mpanjifanao. Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo tahiry marketing sy teknolojia hafa tarihin'ny angona, lasa ny andron'ny varotra tsy voafantina, tsy voafidy ary ny jeneraly.
Fomba fijery ara-tantara fohy
Talohan'ny 1995, ny marketing dia natao tamin'ny alàlan'ny mailaka sy ny doka. Taorian'ny 1995, niaraka tamin'ny teknolojia mailaka, nanjary voafaritra kely kokoa ny marketing. Tamin'ny fahatongavan'ireo finday avo lenta, indrindra ny iPhone tamin'ny taona 2007, no tena nanomboka nifamatotra tamin'ny votoaty ny olona, ​​mora idirana amin'ny efijery ankehitriny. Ireo smartphone hafa dia nipoitra teny an-tsena taoriana kelin'izay. Ny revolisiona finday avo lenta dia nahafahan'ny olona nitondra fitaovana nitazomana tànana tamim-pahaiza-miasa saika na aiza na aiza. Izany dia naterak'ireo mpampiasa ny angon-drakitra sarobidy namboarina novokarina manodidina ny famantaranandro. Ny famokarana atiny mifandraika sy fanolorana izany ho an'ny olona marina dia nanomboka nanjary tetikady marketing lehibe ho an'ny orinasa, ary mbola izany hatrany no izy.
Tonga amin'ny taona 2019 ary mijery any ankoatr'izay, hitantsika fa finday be ny mpampiasa miaraka amin'ny fiankinan-doha amin'ny gadget entin'izy ireo. Ny angon-drakitra momba ny varotra ankehitriny dia azo alaina amin'ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny fividianana. Ho an'ny mpivarotra mba hahalalana izay tadiavin'ny mpanjifany dia mila mahafantatra aloha izy ireo hoe aiza no jerena! Ny data dia afaka manome hevi-dehibe momba ny hetsika haino aman-jery sosialy mety ho an'ny mpanjifa, ny fitondran-tena fizahana, ny fividianana an-tserasera, ny volan'ny fampiasam-bola, ny teboka fanaintainana, ny banga ary ny marikira hafa. Io karazana angon-drakitra marketing io dia ho ivon'ny tetikady marketing mahasoa rehetra.
Paikady fototra amin'ny fanangonana tahiry marketing
Aza mandeha manangona data! Misy tahirin-kevitra momba ny marketing tsy voatanisa azo alaina ao, ary ny ankamaroany dia mila ampaham-bolo mifandraika amin'izany fotsiny. Ny fanangonana data dia tokony hiankina amin'ny toetoetran'ny orinasanao sy ny sehatra ijanonan'ny orinasanao amin'ny tsingerin'ny fampandrosoana. Ohatra, raha fanombohana hanombohana ianao dia mila manangona tahirin-kevitra maro isan-karazany ho an'ny tanjon'ny fikarohana eny an-tsena. Anisan'izany ny:
Adiresy mailaka ataon'ny vondrona kendrena
Safidy media sosialy
Fomba fandoavam-bola aleony
Toerana ho an'ny mpanjifa
Ireo orinasam-pandraharahana dia mety efa manana ny angon-drakitra voalaza etsy ambony momba ny varotra. Na izany aza, mila manavao hatrany ireo sokajy ireo izy ireo ary manangona ihany koa tahirin-kevitra ho an'ny mpanjifa vaovao. Izy ireo koa dia mila mifantoka amin'ny fikatsahana valiny ho an'ny mpanjifa sarobidy sy fahazoana hevi-baovao momba ny lanjan'ilay vokatra misy amin'ny alàlan'ny angona.
Ho fanampin'izany, ho an'ny fanombohana, ny SME, ary ny orinasa lehibe, ny fitahirizana firaketana ny karazan-tserasera rehetra amin'ny mpanjifa dia manakiana. Io dia hahafahan'izy ireo manamboatra paikady fifandraisana mahomby amin'ny clientele.
Tsy mandainga ny isa
88% amin'ireo mpivarotra no mampiasa angona azon'ny antoko fahatelo hanatsarana ny fahazoan'ny mpanjifa sy ny fahazoany azy, raha 45% amin'ireo orinasa no mampiasa izany hahazoana mpanjifa vaovao. Hita ihany koa fa ireo orinasa mampiasa data-n'ny data dia manatsara ny ROI azy amin'ny marketing amin'ny dimy ka hatramin'ny valo. Ireo mpivarotra izay nihoatra ny tanjon'ny fidiram-bolan'izy ireo dia nampiasa teknika fanatontosana angon-drakitra 83% amin'ny fotoana.
Tsy misy fisalasalana na kely aza, ny angona marketing dia ilaina amin'ny fampiroboroboana ny vokatra sy serivisy ho an'ny olona marina amin'ny taona 2020 sy ny sisa.
Tombontsoa amin'ny angona marketing
Andao isika hahatakatra amin'ny fomba lalina ny tombontsoa azo avy amin'ny marketing, izay tarihin'ny data.
Manokana ny paikady marketing - Ny angon-drakitra marketing dia teboka fanombohana mamela ny mpivarotra hamorona paikady varotra kendrena amin'ny alàlan'ny fifandraisana manokana. Miaraka amin'ny angon-drakitra voadinika tsara, ny orinasa dia ampahafantarina tsara ny fotoana handefasana hafatra ara-barotra. Ny fahitsiana ara-potoana dia ahafahan'ny orinasa mahazo valiny ara-pientanam-po amin'ny mpanjifa, izay mandrisika ny firosoana tsara.
53% amin'ireo mpivarotra no milaza fa avo ny fangatahana fifandraisana amin'ny mpanjifa.
MediaMath, Global Review momba ny Data-Marketing sy ny doka
Manatsara ny traikefan'ny mpanjifa - Ireo orinasa manome fampahalalana ho an'ny mpanjifa izay tena ilaina ho azy ireo dia hijoro amin'ny ligy manokana. Fa maninona no mampiroborobo fatratra ny fiara fanatanjahan-tena ho an'ny mpividy fiara 75 taona? Ny fanentanana tarihan'ny angona marketing dia kendrena amin'ny filan'ny mpanjifa manokana. Manatsara ny traikefan'ny mpanjifa izany. Ny marketing, amin'ny ankabeazany, dia mbola lalao famamaham-bahiny, ary ny angon-drakitra momba ny varotra dia ahafahan'ny orinasa manao vinavina avara-pianarana avo lenta. Ny marketing ara-data dia afaka manome fampahalalana tsy miova amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra. Io dia ahafahana mamorona karazan-Omnichannel isan-karazany, na mifanerasera amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny media sosialy, fifandraisana manokana, na an-telefaona ianao, dia mahazo fampahalalana mitovy amin'izany ny mpanjifa ary miaina traikefa ara-barotra mitovy amin'ny fantsona rehetra.
Manampy amin'ny famantarana ireo fantsona fampifandraisana marina - Ny marketing ara-data dia mamela ny orinasa hamantatra hoe iza ny fantsona marketing manao ny tsara indrindra amin'ny vokatra na serivisy nomena. Ho an'ny mpanjifa sasany, ny fifandraisana amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy dia mety hanaitra ny fifandraisan'ny mpampiasa sy ny fitondran-tena tadiaviny. Ny fitarihana namboarina tamin'ny alàlan'ny Facebook dia mety hamaly amin'ny fomba hafa noho ny fitarihana ateraky ny Google Display Network (GDN). Ny angon-drakitra ara-barotra ihany koa dia ahafahan'ny orinasa mamaritra izay endrika atiny mety indrindra amin'ny fantsom-barotra voamarina, na kopia fohy, infografika, lahatsoratra bilaogy, lahatsoratra na horonan-tsary.
Manatsara ny kalitaon'ny atiny - Ny data vaovao dia miovaova hatrany amin'ny mpanjifa kendrena isan'andro, ary ny mpivarotra dia tsy maintsy mamakafaka tsara azy io. Ny data momba ny varotra dia mampahafantatra ny orinasa hanaraka tsara na hanova ny paikadim-barotra teo aloha mifototra amin'ny filan'ny mpanjifany miovaova hatrany. Araka ny nolazain'i Steve Jobs, “Tsy maintsy manomboka amin'ny traikefan'ny mpanjifa ianao ary miasa mihemotra amin'ny haitao. Tsy afaka manomboka amin'ny teknolojia ianao ary manandrana mamantatra hoe aiza no hivarotanao azy ”. Amin'ny fahazoana ny filàn'ny mpampiasa mavitrika kokoa, tsy ny orinasa ihany no hampiditra mpanjifa vaovao fa hihazona ireo taloha ihany koa. Ny kalitaon'ny atiny dia zava-dehibe amin'ny fahazoana ny mpanjifa sy ny fitazonana ny mpanjifa.
Tokony hanomboka amin'ny traikefan'ny mpanjifa ianao ary hiasa mihemotra amin'ny haitao. Tsy afaka manomboka amin'ny teknolojia ianao ary manandrana mamantatra hoe aiza no hivarotanao azy.
Manampy amin'ny fahitana maso ny fifaninanana - Ny data momba ny marketing dia azo ampiasaina amin'ny fandinihana sy famakafakana ny paikadim-barotra amin'ny mpifaninana aminao. Ny orinasa dia afaka mamantatra ireo sokajin-drakitra izay dinihin'ireo mpifaninana ary maminavina ny làlana hofidian'izy ireo hivarotra ny vokatra. Ny orinasa iray izay mampiasa angona handinihana ireo mpifaninana aminy dia afaka misafidy mampiasa paikady fanoherana hamela azy ireo hivoaka ambony. Ny fampiasana angona hianarana ireo mpifaninana dia mamela ny orinasa hanatsara ny fomba fanaovany varotra ankehitriny ary tsy hanao ireo lesoka mitovy tamin'ny nataon'ny mpifaninana aminy.
Avadiho ho hetsika ny fahitana
Manome fomba fiasa azo zahana ny angona marketing. Mba hanatsarana ny fampielezana marketing, mila mahafantatra betsaka araka izay azonao atao momba ny mpanjifanao ianao. Ny orientation amin'ny antsipiriany no lakilen'ny fahombiazana amin'ny taona ho avy. Ny fanatanterahana vahaolana ara-barotra tarihin'ny angona dia afaka manova tanteraka ny fomba fanaovana asa aman-draharaha. Na dia mahira-tsaina izaitsizy aza ny mpivarotra dia tsy afaka manao fahagagana fotsiny izy ireo eny amin'ny hunches. Tsy maintsy omena hery izy ireo amin'ny alàlan'ny fitalahoana ny angon-drakitra momba ny varotra hahazoana valiny ambonimbony kokoa.
Tags: orinasa2 fiaraha-moninafikarohana ifaninananakalitaon'ny atinyfitadiavana mpanjifafantsom-pifandraisanafantsom-barotradata momba ny marketingpersonalizationlasibatrasafidin'ny mpampiasa